Mpanamboatra Bearing Ball Bearing China Xinri
Vidiny ambongadiny China China Factory Tsara kalitao Com ...
OEM Factory ho an'ny China 6203 hafanana avo lenta ...
Sina vidiny mora China Miniature Ball Bearings 608, ...
Vidiny mora vidy tanana China Spinner Factory Wholesale Fid ...
Fitaovam-pandefasana varingarina mandrindra trano
Fahombiazana avo lenta Auto Wheel Hub Bearing
Mitondra ondana ondana ondana mitondra ucp 200series
bearings baolina tsotra avo lenta
NTN / NSK / KOYO Baolina lalindalina mitondra 6300series 、 64 ...
Mpamatsy fitondra miraikitra amin'ny tenany
Super kalitao tapered roller mitondra andiany 30200, 3 ...
Loharanom-pamokarana Nsk Deep Groove Ball Bearing - Deep ...
● Natao hiatrehana ny enta-mavesatra haingam-pandeha
● Izy io dia misy peratra miendrika fanasan-damba miaraka amina fantsom-baolina
● Ny banty baolina dia ahosotra
● Mizara ho karazana seza fisaka sy karazana baolina mampitovy tena izy
● Ny fiakarana dia mahazaka enta-mavesatra fa tsy ny enta-mavesatra
Unidirectional thrust ball bearing and bidirectional thrust ball bearing dia azo zaraina arakaraka ny fihenjanana. Unidirectional thrust ball bearning can bear unidirectional axial load. Fihetsiketsehana baolina alàlan'ny bidirectional, afaka mitondra enta-mavesatra axial bidirectional, izay mifanaraka amin'ny zana-kazo ny peratra. Ny fipetrahana avoakan'ny peratra seza dia fitondra boribory, izay manana ny fahombiazan'ny centering ary afaka mampihena ny fitarihan'ny hadisoana miakatra. Ny fitondrana baolina dia tsy mahazaka enta-mavesatra, ambany ny haavon'ny fetra.
Ny fanindronana baolina dia natao hizarana ny enta-mavesatra amin'ny hafainganam-pandeha ary voaforona peratra miendrika gasket miaraka amina fantsom-baolina. Ny fanindronan'ny baolina dia mizara ho karazany roa, ny karazan-tsoroka fisaka ary ny karazana spherical mampiorina ny tena, satria ampiarahina ny peratra. Ankoatr'izay, ny fiakarana dia mahazaka ny famaky axial, fa tsy ny enta-mavesatra.
Ho fanampin'ireo bearings aseho amin'ity fizarana ity, XRL dia manome bearings baolina hanosehana ho an'ny fangatahana fampiharana manokana. Ity assortment ity dia misy bearings miaraka amin'ny bearings mifono solika sy NoWear.
Fomba sy tombontsoa
● Misaraka sy azo takalo
Ny singa azo zahana amin'ny fitifirana baolina XRL dia azo ovaina. Izany dia manamora ny fametrahana sy fampidinana ary fanaraha-maso ny fikojakojana.
● misalignment nitial
Ny bearings miaraka amin'ny fanasan-damba amin'ny sphered dia afaka mandray tsy fitoviana voalohany.
● Mety ny fanelingelenana
Ireo mpanasa lamba dia manana kofehy vita amin'ny tany mba ahafahan'ny fifangaroana tsy tafiditra. Mihodina ny lavaky ny mpanasa trano ary lehibe kokoa noho ny an'ny mpanasa lamba.
● Azo alaina amin'ny lalana iray sy roa
● Mba hamelana ny lesoka mihamitombo, na amin'ny lafiny iray na amin'ny lafiny roa, dia azonao atao ny misafidy karazana boribory boribory miendrika spherical na misy manana karazana peratra seza boribory
● Haavo haitao avo lenta
● Baolina vy avo lenta - malefaka sy mangina amin'ny hafainganana haingana
● Ny fampiasana ny peratra amin'ny safidy, avela ny lesoka fametrahana
Izy io dia tsy mihatra afa-tsy amin'ireo ampahany amin'ny milina mitondra enta-mavesatra iray sy ny hafainganam-pandeha ambany, toy ny crane hook, paompy mitsangana, centrifuge mitsivalana, jack, reducer hafainganam-pandeha ambany, sns. azo apetraka sy esorina misaraka.
Size lafiny FANOMANANA LOAD Fetra famoahana havizanana Naoty haingana
mavitrika voasakantsakan'ny Haingam-pandeha Mametra ny hafainganana
Teo aloha: Bearing amin'ny kodiarana
Manaraka: Needle Roller Bearings
kapoaka fanindronana vozon'akanjoko
fiaramanidina tokana mitondra tosika baolina
seza mitondra baolina
amidy ambony varotra karazany itondra baolina
Fanitsiana baolina miaraka amin'ny tenany
Stainless Steel Groove Bearings Ball
Double Row Row Groove Ball bearings